सन्यासमा पुनर्विचार गर्लान् त साङ्गाकाराले ?
कोलम्बो । श्रीलंकाका खेल मन्त्री नविन दिसानायकले विश्वकै नम्बर १ टेष्ट ब्याट्सम्यान कुमार साङ्गाकारालाई टेष्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिने योजनामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले साङ्गाकारालाई अझै कम्तिमा एक वर्ष टेष्ट क्रिकेट खेलिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
साथै उनले श्रीलंका क्रिकेटमा बदलावका लागि सरकारले उठाएका कदमका कारण पनि साङ्गाकारा थप एक वर्ष टेष्ट टिममा रहन राजी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘म खेल मन्त्रीको हैसियतबाट कुमारलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि उनले सन्यासको योजनामा पुनर्विचार गरुन् । देशका लागि उनले थप एक वर्ष टेष्ट क्रिकेट खेलुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
दिशानायकेले भने, ‘न्युजिल्याण्डमा मैले कुमारसँग कुराकानी गरेको थिए । उनी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड र सरकारसँग निकै असन्तुष्ट थिए । अहिले ती सबै कुरा बदलिएको छ । त्यसकारण उनी थप एक वर्ष खेल्न राजी हुने अपेक्षा गरेको छु ।’
१०३ टेष्ट क्रिकेटमा १२ हजार २ सय ३ रन बनाएका साङ्काकाराले एक दिवसीय क्रिकेटबाट भने सन्यास लिइसकेका छन् । विश्वकपमा लगातार ४ सतक बनाएका साङ्गाकाराले सानदार फर्मकाबीच पनि सन्यास लिएपछि समर्थकहरु पनि काफी निरास छन् ।
अर्थ / व्यापार, खेलकुद
रोनाल्डोले इन्स्टाग्रामबाट सबैभन्दा धेरै कमाए, मेस्सी दोस्रो स्थानमा
एएफसीको प्रस्ताव- विश्वकप छनोटका खेल चार महिनापछि गराऔं
फरवार्ड गोन्जालो हिगुइन घाइते
ग्यारेथ बेललाई रियल मड्रिड नै प्यारो
फरवार्ड वार्नरलाई अनुबन्ध गर्ने तयारीमा चेल्सी
प्रिमियर लिगमा अब पाँच जना खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइने
‘राफा बेनेटिजलाई मुक्का हान्ने अवस्थामा पुगेको थिए म’
बार्सिलोनाका खेलाडी डेम्बेलेलाई लिभरपुलले लोनमा ल्याउने प्रस्ताव राख्यो
सान्चोलाई अनुबन्ध गर्ने सोचमा रियल मड्रिड !
टोटनह्यामका एकजना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित
एभर्टनका डिफेन्डर यारी मिना घाइते
लिभरपुलका प्रशिक्षक उर्गेन क्लपले खेलाडीहरुलाई दिए यस्तो सुझाव
जुन १७ अगाडि प्रिमियर लिग क्लबहरुले मैत्रीपुर्ण खेल खेल्न सक्ने
फ्लोइड हत्या प्रकरणः चेल्सीका खेलाडीहरुले समेत गरे न्यायको माग
विश्वभरीका खेलाडीहरुले यसरी साझा गरे रंगभेदविरुद्धको प्रतिक्रिया
साउलले गरे एट्लेटिको मड्रिड छोड्ने संकेत
इघालो आउने जनवरीसम्म म्यानचेस्टर युनाइटेडमै रहने
आरबी लेइप्जिगको सानदार जित
जर्ज फ्लोइड मृत्यु प्रकरणः लिभरपुलका खेलाडीहरुले गरे न्यायको माग
इकार्दी पिएसजीमा अनुबन्ध
प्रिया प्रकाशले पुनः सामाजिक सञ्जालमा गरिन् धमाकेदार ‘रि इन्ट्री’
एजेन्सी, २४ जेठ । नजरको गोलीले करोडौं मुटुलाई घायल बनाएर सोसल मिडिया सेन्सेसन बनेकी प्रिया प्रकाश पुनः सामाजिक सञ्जालमा...